Date My Pet » 5 Mibvunzo Zvaunofanira Kumbira On The First Date
kubudikidza Samantha Chikwehwa
Last updated: Sep. 25 2020 | 2 Maminitsi verenga
misi First kungafanana kubvunzurudzwa, asi nokuda kwerudo rwenyu upenyu. Vanoita zvose iwe huta uye kufara. Uye dzimwe nguva unogona kuwana pachako saka akatsva pfungwa vako zuva kuti pakazopera musi, unoziva here ndakadzidza chinhu pamusoro pavo.
Usava neshungu, pane mhinduro ichi.
izvi 5 Mibvunzo kuchaita kuti iwe ubve zuva rako rokutanga nechivimbo vachiziva kana waunonzwa kuvaona zvakare.
Chii chaunofarira chinhu kuita?
Iri nyore mumwe kubva zvizhinji vedu vanoda kutaura nezvedu. Zvichakubatsira kukubvumira kuzodzosera pfungwa kufambidzana kwenyu uye chaizvoizvo kudzidza chii kunovafadza. Kazhinji kana zvamunokumbira mubvunzo uyu, zuva wakowo kuzarurira nezvaasingadi dzavo. Nyatsotarisa pakati positives uye negatives - akavanda mhinduro dzavo aigona kuva pfungwa huru kuti zuva rechipiri kwakavakirwa zvavanofarira.
Rinhiko imwi kuroorwa?
Izvi zvingaita sokuti mubvunzo zvakanaka asi zvakakosha. Kuziva kana zuva rako anosarudza kuroorwa maringe pavo ari kuroora asi uchitsvaga, kuti muzive kana uri kupedza nguva yako nokuchenjera kupinda zuva rokutanga ichi. Unoda nechokwadi chokuti zvinangwa zvako ukama zvienderane. Chokupedzisira chinhu chaunoda ndechokuti vaviri kuti unoda zvinhu zvakasiyana uye kuwana izvi mazuva mazhinji pashure.
Kubvunza mubvunzo uyu kukuru nokuti zvakare, uri akashandura ritaure zvevakomana yako. Uri tapping kupinda zvadzinofunga mhuri. Vanogona kunyange zvinoratidza kana pakupedzisira vangada kutanga mhuri dzavo pachavo. Mubvunzo uyu vachakupai zvikuru kutaura sezvo pane nguva dzose kukuru nyaya wakakomberedza nyaya Vakoma.
Chii chiratidzo chenyu?
Ichi chinhu oldie asi goodie. Kuti ipfungwa yakanaka kana uchida kubvunza mubvunzo uyu pakutanga musi. Vanhu vari kuda nyeredzi kwavo zviratidzo uye kunyange kana havatendi kwokuongorora nyeredzi, vachiri zvachose azarurirwa kunzwa zvaunoziva pamusoro zviratidzo zvavo. Dzinofanira zviratidzo ndivo mumwe kuwedzerwa isu uye sezvo vanhu hapana watinoda kupfuura kudzidza zvinhu zvitsva nezvedu.
Ko iwe kutsvaka shamwari?
Izvi zvinokosha kutanga musi mubvunzo. Ndechimwe chinhu yakawanda daters kudzivisa kubvunza nekuti havadi unozvidzinga mumwe munhu kure. Asi kubvunza mubvunzo uyu uchapa nenjere pamusoro rudzi rwevanhu kubata ziso rako zuva uye kwaunoenda vanounganidza kumusoro kuenzanisa. Edza varege kuva wo kutonga mhinduro yavo kana usingabvumirani navo. Izvi hunovakirwa kwavo zvido uye zvinofanira kugamuchirwa sezvo vakadaro. Shure mubvunzo uyu wakabvunzwa, muchaziva kuti chokwadi kana zuva rokutanga ichi ane mukana kutumbuka kupinda chinhu yakawanda.
12 Anofanira Haves For Mrs. Rudyi